Araraotina indray anaovana politika ny sehatry ny fampianarana | Ny Valosoa Vaovao
Araraotina indray anaovana politika ny sehatry ny fampianarana
par gvalosoa | Nov 14, 2017 | Edito |
Nanongo-tena sy niakatr’afo ny maro nahita tamin’ny haino aman-jery sy fitaovan-tserasera maro samihafa eto an-tanàna ny fihetsiky ny fitondrana Hvm ny amin’ny hetsika ho tanterahiny ny alarobia izao eny Antsonjombe. Nambara mantsy fa hizara fitaovam-pianaran’ny mpianatra eny ny fitondrana tarihin’ny Filohan’ny Repoblika mivady. F’angaha tsy maintsy mandeha mankeny ny filohan’ny Repoblika nefa asana minisitera efa hatramin’ny ela izany? Tsy zava-baovao mba ezaka vitan’ity fitondrana ity eo amin’ny sehatry ny fampianarana izany, koa nahoana no idedahana anaovana angoan-tenda toy izao? Ny zavatra zaraina rahateo iaraha-mahalala tsara, fa toy ny vary aloha ihany, tsy mahavita taona, tsy mahavita taom-pianarana akory. Fantatra rahateo fa tsy ahavita izany velively ity fitondrana Hvm ity, fa “tip top” hatrany no vitany raha hahavita. Ary tsy fitaovana toy izany fotsiny no tena ilain’ny ray aman-dreny Malagasy sahirana mafy amin’izao fotoana izao, fa ny fivelomana maharitra ampy hahaveloman’ny ankohonany. Rehefa miresaka an’izany anefa dia iaraha-mahalala, fa tsy misy afitsoka amin’izany ny fitondrana Rajaonarimampianina. Mampiteny ny moana ary mahamoana ny mahay miteny ankehitriny ny fidangan’ny vidim-piainana, ohatra mibaribary amin’izany ny vidim-bary. Ka ho an’ny mpandinika fiarahamonina, karazan’ny fanariana dia ny vahoaka Malagasy miha- mihitsoka ao anaty fahasahiranana lalina, fa tsy voavaha olana, izao fihetsika amin’ny alarobia eny Antsonjombe izao. Azo lazaina ho fihatsarambelatsihy mihitsy aza hanafenana ny tsy fahombiazana ara-tsosialy…
Ankoatra izay, miharihary tanteraka fa anaovana politika ny sehatry ny fampianarana. N’inona n’inona ambaran’ny ekipan-dRajaonarimampianina dia any amin’ity sehatra ity indray, taorian’ny any amin’ny fiangonana no hihazakazahany anaovana fihetsika miaro propagandy ankolaka. Tsy misy afaka mandà ka hilaza, fa tsy mbola miditra ao anaty rivotry ny fanaovana fampielezan-kevitry ny fifidianana hatrehina amin’ny taona 2018 isika ankehitriny. Efa miha hitan’ny rehetra sy mpanara-baovao soritra, fa efa manomboka miditra amin’izany ny firenena. Ny minia mikimpy na jamba ihany no tsy mahita. Ka izay fihetsiky ny fitondrana rehetra miendrika famoriam-bahoaka toy izao amin’ny alarobia izao dia efa tena resaka miaro politika avokoa n’inona n’inona ambarany. Araraotin’ny fitondrana rahateo ny tsy fisian’ny lalàna mandrara an’izany alohan’ny fifidianana. Ny lavina kosa anefa, dia fampifangaroana ny politika sy ny sehatry ny fampianarana. Izany anefa no miseho ankehitriny. Dia samy hihifikifika amin’ny fanasana ati-doha ho ataon’ny fitondrana Hvm amin’ny ray aman-dreny sy ny mpianatra indray ny rehetra, izay hilaza, fa tsy misy toa ity fitondrana ity…